I-Mesalians iyihlobo lobuhlobo phakathi kwendoda nowesifazane, lapho isikhundla sabo (senhlalo noma impahla) ehluke kakhulu. Kodwa uthando, njengoba uqonda, aluhlukanisi phakathi kwabampofu nabacebile, abagulayo nabaphilile, futhi kaningi phakathi kwezingane nabancane kakhulu ...
Umshado, lapho indoda ikhulile, umphakathi uvame ukuvunywa kunalokho ongakuvumeli. Futhi uma omdala ebuhlotsheni engowesifazane, ke, ngokuphambene nalokho, akamukeli kunoma yimuphi umkhuba wanamuhla. Ngakho-ke, lo mbuzo uvela: uma indoda incane kakhulu - ingabe kukhona ikusasa lobuhlobo kanye nombhangqwana?
Yini omakhelwane nezintombi ezishoyo
Okokuqala, silalela "ukuhlakanipha kwabantu" - yiziphi abantu abavamile abakushoyo mayelana nobuhlobo obunjalo.
Ebudlelwaneni obunjalo, lapho indoda isencane kakhulu, kukhona ikusasa labashadikazi, bacabanga bonke abangenabo ubuvila. Abangane nabangane, omakhelwane nezihlobo - bonke banombono wabo. Ngokuvamile lo mbhangqwana uphoqeleka ukulwa nawo wonke la "inhlebo ebhentshini," ukuvikela ilungelo lokuthanda.
Kodwa kukhona ukungafani. Labo abangenandaba nokungenani oyedwa ohlanganyele ebuhlotsheni akubalulekile kakhulu, indoda noma owesifazane omdala kakhulu kunalokho ufuna ngobuqotho injabulo. Futhi mayelana nabo baveza ukungabaza - bathi, "perebesitsya", "abagula" nayo, thola omncane ...
Ikusasa lombhangqwana lihlala lizandleni zalabo abenza ubuhlobo - amadoda nabesifazane abathile. Kodwa labo abanesithakazelo sokuhleka nokucabangela, ngokusheshisa babikezela ukufa komshado "usemncane, usemdala." Ngakho-ke, abafazi (kanye nabayeni) bayazibuza ukuthi le ndoda isencane kakhulu - ingabe ikhona ikusasa lobuhlobo?
"Awukwazi ukufaka i-kerchief kuwo wonke ama-roller"
Ukuze uqale, ukuze ikusasa lobuhlobo lisekhona, kuyinto ezolile ukuthatha le nkohle. Ungaphenduki ekucaseni abangane, obajwayele kanye nomakhelwane abaqagelayo: indoda incane kakhulu - ingabe ikusasa lomshado?
Yiziphi izazi zengqondo ezishoyo
Uma ngabe ngaphambili umbhangqwana ophumelelayo ongahlosiwe wawubhekwa njengendawo lapho umuntu oneminyaka engu-3-5 ubudala (futhi kungaba ngaphezulu - kuze kube seminyaka engu-7-10), manje akanalo inani elingenakulinganiseki.
Izazi zengqondo zigcizelela ukuthi umehluko ophazamisa ukuthi umuntu usemncinyane kangakanani, kungakhathaliseki ukuthi ikusasa lomlingani lithembele kulokuqala, kulokhu. I-optimal isamanje umehluko weminyaka engu-3-5, ngaphezulu (ngokuvamile iminyaka engaphezu kwengu-10) - lokhu kuyisigameko esibucayi kakhulu.
Kungakhathaliseki ukuthi izithandani zithini, uma ubuhlobo obuqinile buboshwe phakathi kowesifazane osekhulile nendodana encane, lokhu akuyona ubuhlobo bomzali bomzali ogcwele ngokugcwele. Umfazi - "ungumama", ngisho nakancane. Futhi umyeni "ungumntwana" okudingeka uyinakekele. Ngakho-ke, ezimweni eziningi, ama-diners kanye nogogo ugogo balungile, kodwa kuphela okuyingxenye. Lezi zihlobo zizohluka kancane kunamaqembu ajwayelekile.
Yiqiniso, izazi zengqondo zisikhumbuza ukuthi ukuzinza kombhangqwana ngokuyinhloko kuxhomeke ekuzimeni kwabalingani ukugcina uhlobo olukhethiwe lobuhlobo. Futhi uma kokubili kulula, khona-ke lezi zibhangqa zikhona kalula iminyaka engamashumi amabili.
Okokuqala, uma bobabili umyeni nomfazi bekhululekile ekuhlotsheni okunjalo, indawo enhle neyanele yokwanda (umuntu siqu, ochwepheshe), ke ungafaki ukuhlala komuntu oyedwa emkhakheni owodwa ngenxa yemibono yabanye. Futhi ezimpawu zokuqala zenkathazo - ukubhekana nesazi sengqondo somndeni.
Njengomthetho, izinkinga zivela ngqo lapho "ingane" noma "umama" idinga isikhala, indawo, ithuba lokuzibona. I-hyperope ye "umama" noma okunamathiselwe kwayo "kwengane" ingacasula. Ezimweni ezingajwayelekile (ukukhushulwa, ukuthutha, ukufa kwesihlobo esiseduze), lezi zinkinga zizobonakala ngokwazo ngendlela ekulindelwe kakhulu - ukwehlukana kobudlelwane bomndeni.
Ukuze uqiniseke ngokumelene nakho konke akunakwenzeka - kufaka phakathi ukuphoqelelana ukuba njalo usekele indawo yokuhlala, njalo kube nomunye nomunye ngenjabulo nosizo, hhayi ngokuphambene nalokho. Kodwa kusukela okufanayo akuqinisekisiwe futhi abanye, abacebile kakhulu, ngokubheka kuqala, imibhangqwana.
Uma indoda yocwaningo lokudala, noma owesifazane engabekezeli amandla phezu kwakhe - ubuhlobo obunjalo kubo buyoba buhle. Injabulo yezibopho zomshado, okuhambisana nobuhlobo obuseduze nokungaxhunyiwe okungaqondakali "ngisho nomama obizwa ngokuthi" umama "futhi" okubizwa ngokuthi ingane "zinganikeza inhlanganisela emangalisayo. Ngakho, ukuthungatha okunjalo - kwakhiwe ku:
ukuqonda isimo, izinzuzo ngamunye
isifiso sokuba nomunye nomunye
kungaba khona abaningi njengoba ufuna.
Ukuhlanzeka kwesibili akukwenzeka ...
Amantombazane akuzona nje ukuthandana, abancane nabahle - nabo banenkinga yokuziqondisa bobabili ebuhlotsheni nasekuphileni. Kule ndaba, owesifazane ovuthiwe ukhetheke nakakhulu. Yebo, angase angakwazi ukuncintisana nomama oneminyaka engu-18 ubudala, "kodwa angayazi ezinye izinto eziningi".
Ungakhathazeki ngendoda yakhe, umphazamise emathangeni, uma efuna ukucabanga ngento ebalulekile.
Angaba ngumngane, umeluleki, umsizi lapho "owesifazane osemusha" engaba ngumthwalo.
Ngokuvame ukwenzeka, wenziwa ohlelweni lomsebenzi, noma uyazi ukuthi ufunani. Unesikhala esiphilayo noma sehlele kakade ukuthi uzokwazi kanjani ukuxazulula le nkinga noma nini.
Futhi uzokwazisa konke lokhu isithunzi esingenasimo somyeni - asithembeli kuye ...
Amaphutha wesifazane ebuhlotsheni namadoda
Lapho isikhathi sentombazane sothando
Ama-intrigues eHhovisi ekuhlanganyeleni komdabu
Ngemva kokufa kukaJeanne Friske umndeni wakhe waba nesisa
I-Jelly kusuka kuma-apricot
BALSAMELLA isi-Italian sauce omhlophe
I-Helminthiasis ne-prophylaxis yayo ezinganeni